Njengoko lomboniso yorhwebo malunga esizisebenzelayo kwimizi phantsi CIIF, IAS ngumsitho ngamazwe for Industrial yokuZenzekelayo Solutions, Imveliso kunye Process ukufunyanwa okuzenzekelayo, Electrical Systems, Industrial IT & Software kunye Microsystems Technology. Impumelelo iiseshoni zangaphambili eqinisekisa show njengenye yezona inomtsalane ubambisene entsimini esizisebenzelayo kwelaseAsiya, uze wenze njengoko neqonga obungcono iingcali kunye neengcaphephe entsimini ukuba kunye.
Ummandla mboniso we-IAS 2017 ufikelela 56,000㎡, 618 abashishina abavela kumazwe-18 kunye nemimandla, afana neTshayina, Jamani, Japan, Korea, eUnited States, Italy, eSwitzerland, France, Austria, eBritani, Sirayeli, Canada njalo njalo. Ngexesha lo mboniso, iiforam 65 neenkomfa ziye zabanjwa kunye neengcali phezu 178.000 batyelela.
Nofuel Power na ukuya IAS, panel yethu ulawulo, izixhobo solution esizisebenzelayo, izahlulo ulawulo ziimoto ithandwa kakhulu kwindlwana.
ixesha Post: Sep-12-2018